Madaxweyne Muuse Arinkiisu waa Qawda maqashii oo waxba ha u qaban Sool iyo Koonfurteedka Xaladaha Aaga we ka jira? | Qaran News
Madaxweyne Muuse Arinkiisu waa Qawda maqashii oo waxba ha u qaban Sool iyo Koonfurteedka Xaladaha Aaga we ka jira?
Writen by Qaran News | 5:23 am 6th Nov, 2018
Halka Ummadu ka Aamusan tahay,Sool iyo Dhibaatada ka jira , Mucaaradkana Tooshkoodu yahay mid Muuse uun laygu ifinaayo .
Madaxweynaha JSL Md Muuse Bixi Cabdi waa markii labaad uu meel fagaare ah kaga hadlo Dagaalkii ka dhacay Gobolka Sool Koonfurtiisa iyo dhibaatadii ka dhalatay ee Naf bax iyo Dhaawac ba leh .
Waxa Howl gal ah oo Xukumadiisa Guud ahaan ba iyo ta Ummada JSL oo la taaban karto ku dhawaaqday ama kaga qayb qaadanayso xal-uhelida dhimaabada ka dhacaday Gobolka Sool Koonfurtiisa wali ma jirto . Waa marki ugu horeysay ba la odhan karraa ee sidani ay dhacdo , Meesha waxa ka dhaceen iyo Ummada isku shufbeeshayba waa Ummadii Jamhuriyad Somaliland inay labo isu keen -raacan ma ahayn waxii lagu yiqiin Ummadeena iyo sharafeeda .
Tolow marka Madaxweynaha Arinkiisu ma “Qawda maqashii oo waxba ha u qaban baa” Ma uu iska Aamusnaado sidaa ayaa u wanaagsan lahayd! Waayo Aranita sidaa u Qadhaadh ee aanu wax howl gal ah ka gelin inuu ka hadlo ma qurux badana. Sidaa Ummaduba uga amusan tahay ayaa la gudboon Madaxweynaha iyo Xukumadiisa ba .
Mucaradkii iyaguna waxay noqdeen kuwo Tooshkoodu yahay inay Xukumada Muuse uun ku shidaan oo wax kasta oo soo foodsara Qaranka dhinac kast ha noqotee waxay u haysatàn inaan Xil-kasareyn ka howl galkeeda iyo u dhaqaadiida ba.
Taasi ma noqon karto Mucaarad sugan oo Aqoon ,karti, Hagar baxa Qaranku ka muuqdo ee waa Mucaraad ah u adeegaya Danta shiekhsiga iyo sheega shada waxa aan dhab ahayn oo aan muuqan oo aan dhaqaaq iyo damqasho ,lex-jecelo la,aan ku isugu soo Biyo – shubaneysa .
Waxa ummada wax Garadka iyo da,ayarat iyo inta damiirka dadnimad lihi shaqaynaayo in si wada jir ah loogu gurmado Arinta Maanta Dalkeena gudihiisa ka dhacaday ee Soomaalidii Koonfurta iyo Galbeedka iyo kuwii Wajeer ,Madheeri inooga horeeyen gurmadkoodii iyo soo ba gaadheen walina goobta aan lagu heyn wax Jamhuuriyada Somaliland ah .
Iyado laba kaalmood oo waa weyn aynu kaga qayb qaadan karno oo kala ah.
In Madaxweynuhu dul-dhigoo Cidan ka Qaranka oo mug iyo Miisaan leh xasiloonida iyo kala dabeynta gacan wax ku ool ah ka geysta inta ay socoto waan waanta iyo su soo jiidka Labada Beellood ee Walaha ee dhibaatadu dhexartaya Wuufuda kale duwan ee Gurmad ah ee halka yimi dhinac kasta oo ay ka yimaadeen ba ka dhex wadaan isla mar ahanata doonayan in xal oo helo dhibaatad so oaf-jarkeeda , halkaana karam iyo haykalka Nabada iyo Dawladnimada Jamhuuriyad Somaliland waxay tahay iyo halka ay mareyso si dadban oo cilmiyeeysan loo dareensiiyo Soomalida kala duwan ka kala timi saddex Meelood oo Somaalidu degto oo kala Kiiniya ,Ethopia Soomaaliya .
Halka kale wax in Gurmadka oo mid Ciidan ,Ummadeed iyo midka guud ahaaneed oo Heer Qaran ah iyadan in lagu dhaqaaqo balse Madaxdii iyo Ummada Haldoorkeed wali wax u dhaqaaqay lama arko marka laga tegi waayo mid meelah asago Hudheel fadhiya hadal ku yidhi mooyaan sida Madaxweyne Muuse Bixiiyo xukumadiisiba Ficilkood iyo aqoontodu kartiidood.Masuuliyadii dhameyd ee sareyd wax meel ka muuqda ama isu xilqaama aan la kareyn maba la maqleyn ilaa iyo haatan la joogo . Waxa arinkeeni ku soo afmeer maya sheegasho iyo hadal meel laga yidhi taasina Qaran ahaan ma wanaagsan guuldarro inoo horseedo mooyiye .
Ummadu waxay leedahay Muuse bixi ma waxanu ku moodna mise waxaan loo noqon doonin ! , Waa intii codkood iyo Cuduuda dul-dhigay dhaqaale inuu hogaanka Dalka, qabto ee waa inta mudan inay dibu eegis ku sameeyaan waxay tacabkoodii dhalay Maanta Xerro u jira .
Marka ummad waxa la gudboon inay dib u eegis ku sameeyaan . Hadii Madaxdii Qaranku Haraabkii la sheegay iyo isku quful noqotay ,Mucaaradkuna noqdeen kuwo dhibaatooyinka Qaranka soo foodsaaray ka yihiin kuwo Moogan kana dareen waxyaabah Mucaardnimadood adkeynaya kana dhigaya kuwo u leylyan inay hantaan hogaanak dalka kuna soo badhigaan Hufanaantood iyo himiladooda Aqooneed Karti Waayo-aragnimo .